Esi mgbọrọgwụ gam akporo na mgbọrọgwụ Master na-enweghị PC | Gam akporosis
Eder Ferreño | | Gam akporo Root, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Ọ bụ ezie na sistemụ gam akporo na-enye anyị nnwere onwe zuru oke iji mee ihe niile, anyị nwere ike ịchọta ụfọdụ mgbochi mgbe niile. Enwere ike iwepụ oke ndị a ma ọ bụrụ na anyị enweta nnweta ikike ma ọ bụ, dịka amaara ya nke ọma na gam akporo, Root. Ma, Olee otu iji mgbọrọgwụ gam akporo?
Ọtụtụ n'ime ngwaọrụ ndị na-enye anyị ohere ịgbanye ngwaọrụ gam akporo anyị bụ maka PC, mana enwekwara ngwa ndị ga-enye anyị ohere ịnweta ohere. Mgbọrọgwụ si na ama anyị ma ọ bụ mbadamba.
N'isiokwu a anyị ga-anwa ịkọwa akụkụ nke ihe metụtara mgbọrọgwụ na Mgbakwunye gam akporo. Anyị ga-akọwa ntakịrị karịa ihe ịbụ mgbọrọgwụ bụ maka na anyị ga-ekwu maka ụfọdụ ngwa iji mgbọrọgwụ ngwaọrụ anyị, ma gbasara ngwaọrụ ndị na-amanye anyị iji PC, dị ka Root Master, na ndị ọzọ ga-enye anyị ohere ịrụ ọrụ ahụ na-enweghị ya.
1 Kedu ihe iji ịbụ onye ọrụ mgbọrọgwụ na gam akporo?
2 Ngwa kachasị mma iji gbanye gam akporo
3 Esi mgbọrọgwụ gam akporo na mgbọrọgwụ Master
4 Etu esi amata ma m bụ mgbọrọgwụ ma ọ bụ na
5 Gịnị ma ọ bụrụ na abụghị m mgbọrọgwụ
6 Ọ dị egwu iwepụ ekwentị mkpanaaka?
7 Na akwụkwọ ikike voided site na mgbọrọgwụ?
8 Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na emechaa na android enweghị m ike imelite?
9 Ndụmọdụ ị ga-ebu n’uche tupu ịgbanye mkpọrọgwụ
10 Kedu ka m ga-esi wepu mgbọrọgwụ
Kedu ihe iji ịbụ onye ọrụ mgbọrọgwụ na gam akporo?
Dịka m kwuru na mbụ, agbanyeghị na gam akporo anyị nwere nnwere onwe ime ihe ọ bụla, anyị nwere oke. Dị ka Linux dabeere sistemụ, ịrụ ụfọdụ omume anyị ga-mkpa nwere a ikike pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, ngwa ahụ Cerberus nke ahụ na-ejikwa ngwaọrụ anyị achịkwa ma ọ bụrụ na ị zuo ohi, ha nwere ike rụọ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na agbanye mgbọrọgwụ. Dị ka ọ dị na Cerberus, ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ike iji ọrụ niile enwere ike, n'agbanyeghị ihe egwu dị na ngwaọrụ gam akporo, anyị ga-agbanye ya.
Robụ mgbọrọgwụ anyị nwekwara ike:
Wepu mkpuchi onwe nke ụdị.
Wepu ngwa ndị arụnyere na mbụ (bloatware).
Melite usoro ọsọ.
Melite nnwere onwe.
Ọzọkwa hazie ngwaọrụ.
Mee arụmọrụ Wi-Fi nke na-adịghị adị na-enweghị mgbọrọgwụ (dịka iweghachite okwuntughe).
Mee nkwado ndabere zuru ezu karị (na iji ngwaọrụ dịka Titanium ndabere).
Ngwa kachasị mma iji gbanye gam akporo
Enwere ọtụtụ ngwa nke ga-enye anyị ohere ịgbanye ngwaọrụ gam akporo anyị, ma m ga-eme ka a mata ihe ndị na-esonụ.
Kpọọ. Otu n'ime ihe ndị kasị ama na ọtụtụ-eji bụ VRoot. Dị ka ngwa ndị ọzọ kachasị mma iji gbanye ngwaọrụ gam akporo anyị, ọ dị mfe iji, mana ọ bụ naanị maka PC. Ke adianade do, ọ na-ejekwa ozi iji mee ka ụzọ laghachi ma rụọ ọrụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị gam akporo ọ bụla (site na 2.2 gaa na nsụgharị ndị kachasị ugbu a).
Kingo mgbọrọgwụ. Nke a bụ ihe dị irè ngwa dịka nke gara aga, mana a na-ekwu na VRoot nwere ọganiihu dị elu. Ọ na-eji na-eme ka ụzọ azụ (mara dị ka unroot) na-arụ ọrụ na ọtụtụ gam akporo igwe na mbadamba.
FramaRoot. Dịka ngwa na-achọghị kọmputa, ọ naghị arụ ọrụ na ọtụtụ ngwaọrụ ma ọ bụ ụdị dị ka ngwaọrụ ndị gara aga, mana ọ bụkwa nhọrọ ị ga-atụle. Na EGO Have nwere ọkwa na-akọwa etu ị ga-esi gbanye ngwaọrụ gam akporo na Framaroot.
KingRoot. Ngwa ọzọ nke na-enye anyị ohere ịgbanye mgbọrọgwụ gam akporo anyị na-enweghị ịdabere na PC. Na weebụsaịtị ha ha kwuru na ọ na-arụ ọrụ na ngwaọrụ dị iche iche dị 103.790. Nke gị ọ ga-eso n’otu n’ime ha?
N'ezie otu n'ime ngwa ndị a, ị ga-amụta etu isi gbanye gam akporo ma ọ bụ mbadamba gam akporo gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ mgbọrọgwụ SamsungNgwa ndị a dakọtara na mobiles na mbadamba ụlọ ọrụ Korea.
Esi mgbọrọgwụ gam akporo na mgbọrọgwụ Master
Tupu ọ gaba n'ihu ịkọwa Esi mgbọrọgwụ gam akporo na mgbọrọgwụ Master, ana m akwado ka ị gụọ post Android adị adị; Na-akpata ma ọ bụ ghara mgbọrọgwụ? Nke ahụ bụ ajụjụ na otu onye ọrụ ibe m Francisco bipụtara n'oge ya. O yiri ka ọ dị m mkpa ịdọ aka na ntị site na ịgbanye ngwaọrụ gam akporo, akara nwere ike ịjụ ịrụzi ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji nkwa ya, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke a na-ahụkarị. N'aka nke ọzọ, n'otu ụzọ ahụ anyị si enweta ohere niile nke ngwaọrụ anyị, anyị na-emeghekwa ọnụ ụzọ maka ngwanrọ ọjọọ mee ihe gị, ọ bụrụhaala na anyị na-agba ọsọ ya ma nye gị ikikere ime (ihe anyị ga-eme n'amaghị ya).
Ọ bụrụ n’ịgụọlarị akwụkwọ ahụ ekwuru na ị doro anya banyere ya, ihe mbụ ị ga-ama bụ na iji mgbọrọgwụ Nna-ukwu ịkwesịrị ịnwe ngwaọrụ nke dị n’etiti Gam akporo nsụgharị 1.5 na 5.x. Ekwesiri iburu n'uche na usoro a bu ihe akwadoro maka ndi onu ogugu ndi na-enweghi ihe oru ha gha agbanye mgbọrọgwụ, dika Framaroot u Odin, nke abụọ maka Samsung. Ọ bụrụ n ’ime ihe ndị achọrọ, ndị a bụ usoro ị ga - eso:
Anyị ebudatara Mgbọrọgwụ Master .apk si EGO.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ikikere iji wụnye ngwa sitere na isi mmalite ndị amaghi, anyị na-enyere ha aka.
Anyị wụnye Root Master .apk.
Anyị na-agba ọsọ na ngwa ahụ. Anyị ga-ahụ na ihuenyo dị ka nke mbụ nke captures. Ebe a anyị na-enweghị ime ihe ọ bụla, dị nnọọ echere ya ka ịlele ndakọrịta na ngwaọrụ anyị.
Ọ bụrụ na ngwaọrụ anyị dakọtara na Root Master, anyị ga-ahụ ihuenyo ọzọ dị ka nseta ihuenyo ahụ nke anyị ga-ahụ bọtịnụ atọ. Anyị ga-emetụ bọtịnụ na-ekwu «Nkpọrọgwụ».
Anyị na-echere ngwa ahụ iji nyochaa ngwaọrụ ahụ na ihuenyo ọzọ gosipụtara na nke anyị ga-ahụkwa okwu ahụ bụ "Nkpọrọgwụ".
Anyị na-egwu na "Mgbọrọgwụ."
Mgbe usoro ahụ gwụchara, naanị ihe fọdụrụ bụ ịmetụ bọtịnụ na-acha odo odo aka na anyị ga-agbanye mkpọrọgwụ anyị.
Mana otu ihe na - efu: mgbe anyị mechara gbanye mgbọrọgwụ na ngwaọrụ anyị na Root Master, anyị ga - ahụ ngwa ọhụụ nwere aha SuperSu. Ihe na-adịghị mma bụ na ọ ga-ekwe omume na ngwa a dị na China. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ emee, ọ bara uru ịga Google Play na nbudata SuperSu ma ọ bụ Superusuario na Spanish.
Ọzọ yiri nhọrọ na-enye anyị ohere Dịrị gam akporo na-enweghị dabere na PC bụ iRoot. Ọ bụ ngwa nke oge a karịa Root Master ma ị nwere nkuzi nkuzi nke kọwara etu esi eji ya na post anyị iRoot, Mgbọrọgwụ ọtụtụ gam akporo ọnụ na-enweghị mkpa maka PC. Na mgbakwunye, dị ka akọwara na post ahụ, na-eme nyocha na Androidsis nke ụdị "esi gbanye [ngwaọrụ]", na-enweghị nkwuputa na dochie "[ngwaọrụ]" na ngwaọrụ anyị chọrọ Mgbọrọgwụ, ị ga-achọta ozi Mgbọrọgwụ ihe ọ bụla gam akporo ngwaọrụ. I nwekwara ike pịa EGO ma gaa lee ihe dị iche iche anyị mere na nso nso a.
Already marala esi akpata android iji nke a ma ọ bụ usoro ndị ọzọ? Enwere onwe gị ịhapụ ahụmịhe gị na ihe ndị a.
Etu esi amata ma m bụ mgbọrọgwụ ma ọ bụ na
Nwere ike inwe obi abụọ ma ị gbanyere mkpọrọgwụ gị gam akporo ekwentị ma ọ bụ. Ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị zụta ekwentị site na onye ọzọ. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata, enwere ụzọ dị mfe iji chọpụta. Zọ kachasị mma iji lelee bụ site na iji ngwa. A na-akpọ ngwa a Root Checker.
Ngwa a, nke ị nwere ike ibudata a njikọ, ọ bụ nhọrọ kachasị mma iji chọpụta ma ị bụ mgbọrọgwụ ma ọ bụ na ọ bụghị. All ị ga-eme bụ wụnye ngwa na gị gam akporo ekwentị. N'ime ya ị hụrụ bọtịnụ na-enye gị ohere iji nyochaa ngwaọrụ gị. Yabụ, ọ ga - agwa gị ma ị bụ mgbọrọgwụ ma ọ bụ na ị bụghị. Ọ dị mfe ịma, ọ na-ewekwa obere oge.
Gịnị ma ọ bụrụ na abụghị m mgbọrọgwụ
Ọ bụrụ na anyị abụghị ndị ọrụ mgbọrọgwụ, ọ na-eche na anyị enweghị ike ịnweta ikikere superuser. Ndị ọrụ mgbọrọgwụ na gam akporo nwere ohere ịnweta ndekọ mgbọrọgwụ nke etinyere sistemụ arụmọrụ. Nke a mere na-enye anyị ohere ịchịkwa faịlụ ndị a na uche anyị. Enwere ike ịme ọtụtụ mgbanwe n'akụkụ a.
Yabụ, ọ bụrụ na ị bụghị mgbọrọgwụ, ị gaghị enwe ohere ndị a. Simply ga-enwe ike iji nkịtị gị gam akporo ekwentị, na-enweghị ịnweta faịlụ ndị a na-enye gị ohere gbanwee akụkụ ụfọdụ nke ekwentị gam akporo gị.
Ọ dị egwu iwepụ ekwentị mkpanaaka?
Dabere na mkpanaka gị bụ ihe nwere ike inye gị ọtụtụ uru na ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na enwerekwa ọtụtụ ihe egwu dị iche iche nke enweghị ike ileghara anya. Nke mbụ, ọ bụrụ na ị wụnye ngwa na ekwentị gị, a na-arịọ ụfọdụ ikikere, iji nwee ike ịwụnye ya na ngwaọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ mgbọrọgwụ, ị na-enye ngwa ịnweta faịlụ sistemụ niile. Nke a na-eburu na ngwa ahụ enweghị oke ịgba ma ha nwere ike ịnweta ihe niile. Ihe nwere ike ịdị oke egwu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị wụnye ngwa ọjọọ. Ebe ọ bụ na ị ga-enwe ike ime ihe niile ị chọrọ na anyị ngwaọrụ.
N'aka nke ọzọ, usoro dịrị Android na-gbagwojuru anya. Nke a bụ ihe kpatara na anaghị atụ aro ya maka ndị ọrụ nwere obere ahụmịhe ime ya. Ebe ọ bụ na ọ dị mfe ịmehie, nke nwere ike ịnwe nsonaazụ na-egbu egbu maka ngwaọrụ anyị. Ọzọkwa ozugbo ị gbanyere mkpọrọgwụ, ị ga-akpachara anya na ihe ị wụnye, ikikere ma ọ bụ faịlụ ị na-ejikwa.
Ya mere, mgbọrọgwụ gị gam akporo ekwentị ọ bụ ihe a ga-echebara echiche nke ọma tupu ịme. Ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ị na-akwa ụta n'oge ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume ịgbanwe usoro ahụ, ọ dịghị mfe ịmezu ya.
Na akwụkwọ ikike voided site na mgbọrọgwụ?
Ikekwe oge ụfọdụ ị nụrụ banyere isiokwu a. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị mgbagwoju okwu mgbe ọ na-abịa na-akpata. Dị ka i nwere ike ida gị gam akporo ekwentị akwụkwọ ikike, ma ọ bụghị 100% ụfọdụ. Ya mere, ọ na - eweta ọtụtụ obi abụọ n’etiti ndị na - azụ ahịa.
Ọ bụ eziokwu na akụkụ ụfọdụ, mana ọ bụrụ na ịmara ntuziaka nke European Union, enwere ike na nke a ga-akwụsị ịbụ ihe mgbochi. Ọ bụrụ na ị bi na European Union ma zụta ekwentị n'otu n'ime obodo, ọnọdụ ahụ dịtụ mgbagwoju anya. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-adaberekarị na ndị nrụpụta ọ bụla.
Ọ bụ ezie na omume na-adịbeghị anya kemgbe na-emepụta abụrụla ndị na-anaghị anabata iwu na nke a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ekwentị Samsung, ihe mbụ ha lere anya bụ ma ị gbanye mgbọrọgwụ ma ọ bụ. Ọ bụrụ otu a, nrụzi agaghị adị n'okpuru akwụkwọ ikike. Ihe nwere ike ịbụ nnukwu ụgwọ maka onye ọrụ. Ma, ọ bụla emeputa ga-enwe ike mfe ịchọpụta ma ọ bụrụ na ị na-akpata.
Mana, dịka anyị kwuru, ọ dabere na onye nrụpụta. Ọ bụ ezie na ọ bụ ezigbo ihe egwu, na mgbe ị gbanye mgbọrọgwụ ị ga-atụfu nkwa ahụ. Ugbu a enweghi iwu doro anya n'echiche a. Ọ bụrụ na enwere obi abụọ, ịnwere ike ịkpọtụrụ webụsaịtị ndị nrụpụtara, ebe a na-enwekarị ụfọdụ ozi gbasara ya.
I nwekwara ike zoo mgbọrọgwụ N'ihe omume na ngwa ọ bụla na-enye gị nsogbu maka ịbụ nnukwu onye ọrụ.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na emechaa na android enweghị m ike imelite?
Ọzọ nke bụ isi nsogbu anyị nwere ike ihu mgbe na-eme mgbọrọgwụ. Mgbe ị mere nke a na ekwentị gị, mmelite ọkwa na-apụkarị. Ọ bụ ezie na ọ dabere nke ukwuu na ndị nrụpụta ọ bụla. Ya mere, OTA mmelite, nke bụ ihe anyị na-enweta na ekwentị, anyị kwụsịrị ịnata.
Nke a na-amanye anyị ka anyị chọọ mmelite na nke anyị. Anyị nwere peeji ebe ị nwere ike ibudata mmelite a na aka, n'ụdị APK, dịka ọmụmaatụ. Mana, nke a nwere ike ibute ọtụtụ ihe egwu. Nke mbụ, anyị amaghị ma ọ bụrụ na ọ bụ nchekwa echekwara dị ka gam akporo. Ọzọkwa, site na ịwụnye ya, o yikarịrị ka ọ ga-ewepụ mgbọrọgwụ na ekwentị.
Ya mere, ọ bụrụ na ị wụnye mmelite, ọ ga-abụrịrị na ị gbanye mgbọrọgwụ ọzọ. Yabụ ị gafere usoro ahụ ọzọ. Yabụ n'echiche a enwere ọghọm ole na ole na-eme ka o sie ike inweta ma ọ bụ wụnye mmelite.
Ndụmọdụ ị ga-ebu n’uche tupu ịgbanye mkpọrọgwụ
Ọ bụrụ na ị mere mkpebi iji gbanye ekwentị gam akporo gị, enwere ọtụtụ akụkụ ị ga-ebu n'uche tupu ịmalite usoro ahụ. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ị ga-amalite usoro a, ị gaghị enwe nsogbu n'oge ya.
Tupu ịmalite, ị kwesịrị ijide n'aka na ị nwere ma ọ dịkarịa ala batrị 60% na ekwentị. Ọ bụ usoro nwere ike iri oge na iwe oge. Ya mere, ị gaghị eme ya na batrị dị ala. Dịka nke a nwere ike ịkpata nsogbu ma ọ bụ ịnweghị ike mezue ya.
Ọ bụrụ na ị ga-agbanye kọmputa ahụ, ọ ka mma iji laptọọpụ. Ebe ọ bụ na n'ụzọ a, ị dabereghị na nke ugbu a. Ọ bụrụ na kọmputa ahụ kwụsịrị, n'ihi na ike na-apụ, ịnwere ike imebi ekwentị na enweghị ike ịgbanwe agbanwe. Ya mere, laptọọpụ dị nchebe na nke a.
Mgbe ị gbanye mgbọrọgwụ, akachaghị data echekwara na ekwentị. Ma ndị nke ị nwere n'ime ebe nchekwa dị n'ime ma ọ bụ ndị nke dị na SD. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme otu ọ dị mma, maka nchekwa, mana a gaghị ehichapụ ha n'ụzọ ọ bụla.
Kedu ka m ga-esi wepu mgbọrọgwụ
Ọ bụrụ na ị bụrụla onye ọrụ mgbọrọgwụ na ekwentị gam akporo gị, mana ị hụghị uru ma ịchọrọ ịgbanwe ya, anyị nwere ike ịme ya. N'echiche a, enwere ọtụtụ ohere, nke dabere na akụkụ nke ROM ị jirila mgbe ị gbanye ekwentị gị.
Enwere ụfọdụ ROM nke na-enye gị ohere ịmeghe ozugbo. Ha nwere njirimara na-enyere gị aka ịgbanwe mgbanwe ahụ wee weghachite ekwentị na mbido ya. Ọ bụ ọrụ a na-akpọ Unroot. Mana ọ bụghị ihe anyị nwere dị na omenala ROM niile dị ebe ahụ.
Na mgbakwunye na nke a, anyị nwere ike iji ngwa ndị ọzọ. Ndị na-enyocha ihe nchọgharị dịka ES Explorer na-enyere anyị aka iwepu folda mgbọrọgwụ, nke mere na ozugbo emere, mgbe ịmalitegharị ekwentị ahụ, anyị nwere ekwentị ahụ na steeti ya. Enwekwara ngwa ọzọ na Storelọ Ahịa Play, nke na-enye gị ohere ịgbanwe mgbọrọgwụ nke ekwentị niile. I nwere ike ibudata ya ebe a
Ọ bụrụ na nke awụnyere na-enyeghị gị ohere a, ị nwere ike iji aka ya wepu ya. Ihe ị ga - eme bụ ịmalitegharị ngwa ngwa mbụ. Manufacturersfọdụ ndị nrụpụta na-enye ndị ọrụ ngwaọrụ ịtinye ngwa ngwa ha nwere, nke mere na ewepụrụ mgbọrọgwụ kpamkpam.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Root » Esi mgbọrọgwụ gam akporo
Ihe 183 kwuru, hapụ nke gị
ihichapụ ozi na ekwentị? maka nexus 5 na mgbe obula igbanwe ya, ị gha aputa ya ... ma achoghi m
magburu onwe post. Enwere m ike ịgbanye nchekwube m pro n'ụzọ dị ebube na nkeji 2. Daalụ nke ukwuu.
Kedu ngwa ị jiri?
Olee otu m si agbanwe andrid ka m na Spanish na galaxi s4 m kemgbe emelitere na ihe niile dị na bekee
Zaghachi ka igbanye
M sonyeere ajụjụ ahụ, ịgbanye usoro a na-agụnye ịhazi?
Usoro a anaghị edozi ma ọ bụ hichapụ data ọ bụla.
Ndewo enyi, enwere m galaxy s2 t989 ose na ekwentị ha na-ekwu hercules… ị chere na ị nwere ike ịrụ ọrụ na ngwa ahụ iji gbanwee ụdị androit m. Echere m azịza gị
Zaghachi kevin vargas
Ndewo Francisco, ị nwere ike inyere m aka ịzụta Samsung Galaxy Ace 4 ma ọ gbanwere na a kọọrọ ya dị ka ezuru ohi, onye rere m ya (enyi m ochie) anaghị akwụ ụgwọ, kedu ka m ga-esi gbanwee imie wee bụrụ nwee ike iji ya?
Zaghachi ka gissel
Emere m ya naanị na enweghị nhazi ọ bụla achọrọ.
ọ dakọtara na nexus 4? Ọ na akwụkwọ ikike furu efu ma ọ bụrụ na ọ na-eme?
Enwere m xperia s, ihe na-agbanye mgbọrọgwụ ọ dị mma maka ọsọ na ogologo oge batrị ahụ?
Akara mmuke dijo
Inwe a-acha ọbara ọbara button na-acha odo odo ma ọ bụ violet otu, ha chọrọ ide «odo odo button», mgbe-acha odo odo nwere ike ịpụta «Raised-acha ọbara ọbara na agba na akwusila emebi»
Zaghachi na Akara mmuke
na XT890 ma ọ bụ Razr I, naanị otu bọtịnụ na-acha odo odo na-apụta na njedebe. Ọ naghị agbanye mgbọrọgwụ ya
Zaghachi to cofla2004
Giora obere dijo
Ọkachamma, na-arụ ọrụ dị ukwuu na Samsung Tab 3 tablet.
Zaghachi Giora Minor
Ndewo Giovanni, ị nwere ST-210 na gam akporo 4.1.2? Abụ m Andres si Argentina. Daalụ!
chaị ọ rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi daalụ nke ukwuu. Ekele ndị enyi.
Na nexus 7 2012 ọ naghị arụ ọrụ 🙁
Zaghachi Adrián Gracia
Kedu ka m ga-esi nweta ngwa njikwa mgbọrọgwụ ndị China?
Banye Storelọ Ahịa Play ma wụnye SuperSu
Otu ihe ahụ mere m, mgbe m tụgharịrị, m wụnye supersu n'asụsụ m, m meghere, emelitere ọnụọgụ abụọ ma arụnyere ya, mgbe m mechara ihe niile m gara na menu gam akporo, ntọala, ngwa, hụ ihe niile, chọọ maka Mgbọrọgwụ ndị China ma gbanyụọ ya. Site n'ebe ahụ supersu malitere jikwaa mgbọrọgwụ. Ahụghị m nhọrọ ọzọ
Ọ rụụrụ m ezigbo mma na s3 mini m mana kedụ ihe m ga-eji ya mee?
Na nke bụ ihe kwesịrị ekwesị ngwa ime ka ngwa ọdịnala na cell n'ihi na m na-agbalị na otu ma ọ naghị arụ ọrụ ..
Francisco ezigbo abalị
Emere m nwụnye nke mgbọrọgwụ nna m ukwu na mgbe m gbanyechara ya, ebudatara m ngwa a na-akpọ Font bụ ịgbanwe leta nke interface ahụ, ihe mere bụ na lg g2 weghachitere onwe ya na mgbe ọ malitere inye screenshots nke ozi: ịnabata ikpochapụ: ugboro ugboro na ọ dịla ka ọkara otu awa. M na-agbanyụ ya ma na ọ laghachi azụ na otu ozi ahụ na-agbapụta.
M na-agwa gị na m na-echegbu onwe m ajụjụ m na-: Mmebi gị sistemụ? furu efu akwụkwọ ikike? Kedu ka m ga-esi mee ka ọ dịghachi ndụ? BIKO NYERE M AKA.
Chọọ androidsis maka ọkwa iji gbanye umn mbụ femụwe na ọnọdụ offline ma ị ga-emeghachi ya ọzọ.
Emere m ya na Samsung galaxy m mega e chere na m gbanye ya na onye ọrụ China kachasị abịa ma m budata mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ ọ na-agwa m na abụghị m mgbọrọgwụ.Ọzọ m nwere ike iwepu mgbọrọgwụ ndị China bụ na nbudata m official rom na-egbu maramara. site odin na okwu ozo o rughi oru nye ihe nlere samsung galaxy mega 6.3 att
Nwere ike ibudata otu sọftụwia ahụ?
Nexus 5. gam akporo 4.4.2. Ọ naghị arụ ọrụ
Otu ihe a, Nexus 5. Android 4.4.2. Ọ naghị arụ ọrụ
Zaghachi Luri Olete
Ọ bụrụ na ọ rụụrụ m na lg g2 d805 m na Claro Colombia na m ehichapụlarịrị ngwa ndị etinyegoro na naanị ohere.
Zaghachi Adolfo Quevedo
Ọ rụrụ ọrụ na mbadamba t7014 noblex nke Argentine rụpụtara nke na-abụghị onye ọzọ karịa mbadamba nkume ndị China hisense sero 7 Lite na ... Ighachite dị mfe, ọ dịghịkwa mkpa ịmalitegharị mbadamba nkume ahụ ... Ndị na-ekwu na ha gbadara onye na-enyocha mgbọrọgwụ na m na-atụba ha na ọ dịghị Ha bụ mgbọrọgwụ, ọ ga-abụrịrị na ha abanyela ọgbaghara n'ihi njikwa mgbọrọgwụ ndị China, n'ezie mgbe m jụrụ ma ha chọrọ ikwe ka mgbọrọgwụ nweta onye mgbọrọgwụ ahụ n'ihi na ha anaghị aghọta Chinese ha gwuru ihe ọ bụla ma gbochie ngwa ahụ iji nweta ohere mgbọrọgwụ chke, na-eduzi site na agba mgbe ị na-abanye Ngwa njikwa ndị China, ọ bụrụ na mkpụrụedemede ndị China na-acha uhie uhie, ngwa ahụ enweghị ikikere mgbọrọgwụ, yabụ ana m akwado ibudata Supersu ozugbo ha gbanyere mkpọrọgwụ, bụrụ kpachara anya, ngwa Chinese ga-adọkwa gị aka na Supersu chọrọ ịnweta mgbọrọgwụ, lee anya nke ọma ebe ị ga-emetụ iji nye ya ikike, wee gbanyụọ ngwa China site na ntọala ngwa wee gbochie ikikere ya na supersu ka ị nwee ihe niile n'usoro .., na maka ịhụnanya di Ejila ederede ederede, ị ga-ejide n'aka na ROM na-akwado ha ma ọ bụrụ na otu ihe agaghị eme gị dị ka onye ọrụ lg ... Daalụ maka naanị usoro nke rụrụ ọrụ
Zaghachi Dahaka Dunkelheit
ọ dị mma ịgbaso usoro francisco na kansụl gị, aga m eme ya na mbadamba nkume ebe m nwere otu, m ga-achọ ịma ma mgbanwe nke ọkpọkọ ahụ masịrị gị, ọ bụrụ na ịnwere ike ibudata ngwa ndị ọzọ, ị nwere ike ịnyefe ha na kaadị? Daalụ nke ukwuu!!
Zaghachi iji nweta
Kedu ka m ga-esi wepu ya?
Na Motorola, moto g na njedebe naanị na-apụta bọtịnụ na-acha odo odo. Ọ naghị agbanye mgbọrọgwụ ya
Zaghachi nke wolf
Ọ naghị arụ ọrụ maka m na xperia z m ga-enweta bọtịnụ odo odo ??????
Ọ rụọla ọrụ zuru oke maka m na: i-joi (i-Call 350); naanị mgbe ị wụnye Super Su iji melite ọnụọgụ abụọ, ọ na-enye m = herror. N'aka nke ọzọ… mgbe ịwụnye mgbọrọgwụ Checker Basic SI .SI ọ na-agwa m na nke «Ekele a Ngwaọrụ nwere mgbọrọgwụ acces» ¿¿¿¿¿
Na NoTE II ọ naghị arụ ọrụ ọ na-ekwu njehie na nchekwa ọhụrụ nke Saumsung na bọtịnụ na-acha odo odo na-egosi onye maara ihe ọ na-ekwu hehehe
Mgbe ị gbalịsịrị ọtụtụ ụzọ otu mechara rụọ ọrụ nke ọma na lg 7 jelii bekee emelitere, ekele Francisco.
nje virus dijo
Enwere m asus memo na mpe mpe akwa fhd 10,1 na adroid 4.3 na ọ naghị eme ihe ọ bụla ma ọlị ma ọ bụ mgbọrọgwụ ma ọ bụ mee usoro ma ọ dịghị mgbọrọgwụ
Ọ rụụrụ m ọrụ, mfe ngwa ngwa ma dịkwa mfe !! Anaghị m ekwu okwu! Ana m edebe ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ! mana oge a achoro m ịkekọrịta na ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na LG pro Lite m na maka ndị na-ekwu ihe bụ agba odo, maka m ọ bụ nke dị n'aka ekpe m na-acha ọbara ọbara na nke aka nri m na-acha odo odo = acha odo odo !! hahaha kedukwanu na jisie ike!
Zaghachi Ramsés García
Naanị m gbanyere mgbọrọgwụ galaxy GT-P3113 ma ọ gbanwere nke ukwuu, anaghị m edozi ma ọ bụ hichapụ ihe ọ bụla. Daalụ !!!!!
Zaghachi Alexander De La Asuncion
Ọ rụghị ọrụ na s4 mini m
Ana m ebudata ya, ana m eme usoro niile nke ọma mana agba abụọ na-acha odo odo na ọbara ọbara adịghị apụta. Naanị odo odo na enweghị ọganihu ọzọ. Mmadu enyere m aka?
Na nhọrọ ikpeazụ m na-enweta nnukwu bọtịnụ na-acha odo odo ma ọ bụghị ọbara ọbara na-acha odo odo nke na-apụta na njide.
Ekwentị m bụ ama ama nke Samsung galaxy na ihe ọ bụla ọzọ enweghị ike ịgbanye ya ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka m ga-enwe ekele maka ya nke ukwuu
Ezigbo mma na daytona mana m na-ehichapụ ap
ọ na-arụ ọrụ na samsung s4 mini ??
Ọ dị afọ iri !! Naanị ihe m na-amaghị bụ etu m ga-esi gbanyụọ ngwa ahụ iji supersu. Enwere m android 4.1.1 ma ọ naghị enye m nhọrọ iji gbanyụọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka na nke ahụ, ọ ga-adị mma.
Onye nwere i-oku 350 chọrọ otu faịlụ niile dị na folda APP ka ịchọta ya, ị ga-aga ebe nchekwa dị n'ime mkpanaka yana ụzọ SYSTEM / APP bụ na m na-ehichapụ ọtụtụ faịlụ ma anaghị m cheta ndi m na-ehichapụ ma o na enye m otutu njehie, biko mee ka mmadu mee kootu folda gi, email m pjuanjo_1@hotmail.com
Na-eche ma na ekele
Nyere aka wụnye ya Emere m usoro ahụ mana n'ikpeazụ ọ naghị egosi karịa bọtịnụ na-acha odo odo ọ bụghị nke na-acha ọbara ọbara ma site n'ebe ahụ anaghị eme ..
Na njedebe m uninstalled nna ukwu na super na-agba ọsọ maka iri. Onye na-enyocha mgbọrọgwụ na-agwa m na ọ gbanyere mkpọrọgwụ. Budata greenifie na-etinye ngwa na hibernation ma ugbu a, alcatel m na arụsị aka na-agba ọsọ nke ọma. Daalụ nke ukwuu. Ọ gbaa m ume ka m gbanye mgbọrọgwụ ya. Rịba ama na Francisco dọrọ aka na ntị na ọ bụghị ekwentị niile na-agbaso usoro a. Ekele si Argentina.
Zaghachi santiago marcos soria preiti
o dikwa maka my sony sp?
Ngwa ahụ jeere m ozi zuru oke, enwere m Samsung S4 na ajụjụ m bụ, mgbe ịgbanye ekwentị, enwere m ike iwepụ ngwa ahụ?
M gbanyere mkpọrọgwụ na xperia L na ọ bụ kediegwu… .ma na a galaxy s3 mini e nwere nanị a-acha odo odo button… .. nso nzọụkwụ ọzọ?…
Enwere m moto g arụnyere ya, agbasoro m usoro ahụ ma bọtịnụ na-acha odo odo pụtara, etinye m ya na ọ pụtara mkpụrụedemede ndị China mana ọ na-agụ sdcard na mgbọrọgwụ .. Na m ji mgbọrọgwụ Checker wee gwa m na abụghị m mgbọrọgwụ . dika m si eme?
Enweghị m ike imelite ngwaọrụ Samsung galaxy s III mini kedu ka m ga - esi ewepu mmemme a maka ekele
XPERIA Z Ultra, agbasoro m usoro ahụ na njedebe m na-ahụ naanị bọtịnụ na-acha odo odo ọ bụghị nke na-acha odo odo na nke na-acha ọbara ọbara, enyochare m iji hụ ma ọ gbanyere mkpọrọgwụ na ọ naghị arụ ọrụ. Onwere onye mara ihe ozo?
Zaghachi Carlo Coello
mgbe ị bụ onye ọrụ mgbọrọgwụ ị nweghị ike imelite ọ bụ otu n'ime ọghọm ị nwere ike imelite aka site na nbudata ha na iji pc
Ndewo ọ na-arụ ọrụ na otu galaxy n'akpa uwe tinyere 4.0.4
Ndewo, m hụrụ na otu ihe ahụ na-eme ọtụtụ dị ka na njedebe ikpeazụ, naanị otu bọtịnụ na-acha odo odo na-egosi na mgbe a na-eme ya enweghị ihe ọ bụla ... ... na mgbọrọgwụ anaghị arụ ọrụ ... ngwọta ọ bụla? Enwere m galaxy ama. Daalụ nke ukwuu.
Esi gbanye galaxy s4 mini na gam akporo 4.2
ọtụtụ ekele ọ na-arụ ọrụ zuru oke maka m na alcatel one touch m, pop (520),
M na-ama na-agbalị n'ụzọ ndị ọzọ na ọ naghị arụ ọrụ m, ma gị na-arụ ọrụ zuru oke maka m 😀
Ndewo ndị enyi, nke a dị mma
naa na s4mini anaghị enye, na njedebe enwere bọtịnụ 2
Ọ naghị arụ ọrụ maka m na galaxy m ace, na njedebe m na-enweta ogologo odo odo odo
ọ bụ ụgha niile
Zaghachi ka rami
Enwere m ike ịgwa gị na emeghị m ya, ebe ọ bụ na emere m ya na alcatel m. Achọpụtara m na m na-eji ngwa ndị chọrọ superuser.
eji aka agha dijo
hey enyi, ọ na-arụ ọrụ maka lg l9 na android 4.0?
Zaghachi ka armando
Mmemme m wepu ma bugharịa sd ngwa ọ jụrụ m ka m nwee ike ị ga-egwu egwu mgbe ị na-eme usoro ọ na-arụ ọrụ ọfụma ma ugbu a enwere m ike iwepụ ngwa nke onye na-arụ ọrụ cellular m na xperia m
Zaghachi ka clau
hey, awụnyere superus ọzọ na nke ngwa ahụ nyere m anaghị ekwe ka m jiri ya .. kedu ihe m ga - eme?
Emere m ihe niile ị tinyere ma achọrọ m ịlele ma m nweelarị mgbọrọgwụ na mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ mana ọ na-agwa m "Ewela iwe" Ngwaọrụ a enweghị ụzọ kwesịrị ekwesị
Nwere ike ịgwa m ihe m ga-eme?
Enwere m mbadamba acer iconia B1-A71 mbipute 4.2.1
M ga-enwe ekele maka ya.
Otu onye anwalewo ya na xperia m (c1904) ... Ọ ga-amasị m ịma ma ọ na-arụ ọrụ na ụdị ahụ
Enwere m ụdị ahụ mana anaghị m anwa anwa gbanye mgbọrọgwụ ya
ajụjụ ọzọ gịnị kpatara na ebudatara ya na usoro EXE?
Ana m arụ ọrụ na Samsung galaxy n'akpa uwe neo ekele n'ikpeazụ m bụ mgbọrọgwụ ekele bro
Rịba ama na-arụ ọrụ maka Samsung galaxy ama ma ọ bụ x phería gbalịa ya na ụmụnne m na ihe ọ bụla
Ndewo… aha m bụ Brian… Achọrọ m ịrịọ maka enyemaka gị… okwu a bụ na enwere m nsogbu na ngwa a ma ọ bụ na mgbe ị na-etinye ya, ọ bụghị naanị na anaghị m agbanye s4, mana ozugbo m wụnye ya na mgbe m matara na ọ naghị arụ ọrụ achọrọ m iwepụ ya mana enweghị m ike ịme ya ... Achọrọ m ịjụ gị ihe kpatara na enweghị m ike ịme nke a yana kedu ka m ga - esi wepụ ya na ngwaọrụ m ... biko nwee olile anya ị nwere ike inyere m aka ..!
Ndewo ... aha m bụ Brian ... Achọrọ m ịrịọ enyemaka gị ... okwu a bụ na enwere m nsogbu na ngwa a na nke ahụ bụ na mgbe ị na-etinye ya ọ bụghị naanị na anaghị m agbanye s4 mana otu mgbe m awụnyere ya na mgbe m matara na ọ naghị arụ ọrụ Achọrọ m iwepụ ya mana enweghị m ike ịme ya… Achọrọ m ịjụ gị ihe kpatara na anaghị m eme nke a yana kedu ka m ga - esi wepu ya na ngwaọrụ m… biko nwee olile anya na ị nwere ike inyere m aka ..!
Site na Alcatel One touch 918-D enwetara m ogwe mmanya na-acha odo odo, mana enweghị uhie ma ọ nweghị ihe ọ bụla. M na-enye ya na ihe ọ bụla. Ana m enweta ụfọdụ akwụkwọ ozi mgbe m pịa ya. Ọ dị oke njọ, m ga-anwale ụzọ ndị ọzọ
Dekọọ aq ma ọ bụrụ na ịnọghị android 4 n'ihu, ngwa a agaghị arụ ọrụ na alcatel gị.
Kedu peeji m nwere ike ibudata ya
Zaghachi Florentino obando
>. <anaghị arụ ọrụ na HTC VIVID ọ bụ naanị mkpụrụ ndụ
O di ebube! PUKWU puku ekele!
Na lg L7x m ọ naghị arụ ọrụ, naanị bọtịnụ na-acha odo odo pụtara ma ọ gbanyeghị mkpọrọgwụ
Captain Whipala dijo
che francisco anaghị arụ ọrụ ... Emere m ihe niile dịka ọ dị ... wụnye mmemme ... ihe niile na-esote dịka ntuziaka ahụ ruo na njedebe. mana mgbọrọgwụ na-agwa m na m abụghị mgbọrọgwụ
na supersu adighikwa m ahu. enwere m galaxy s3.
Zaghachi Captain Whipala
Chọọ gam akporosis "Esi mgbọrọgwụ Samsung Galaxy S3" na ị nwere nkuzi a kapịrị ọnụ iji nweta Nkpọrọgwụ.
nwere virus na ngwa faịlụ dsd pc m na - egbochi antivirus
Budata ngwa n'efu dijo
Daalụ corduroy, ị nyeere m aka nke ukwuu na ntụgharị a.
Zaghachi ka Free APK Download
Enwerem nova amaghim ma inwere ike igba mgbọrọgwụ
Zaghachi carlos lopez
Na-arụ ọrụ na lenovo s960t
Ọ bụrụ na ndị Super Su na-ekwu na ọ bụghị mgbọrọgwụ, ọ bụ n'ihi na ọ bụghị. E nwere ụdị nke mgbọrọgwụ abụọ bụ onye ọrụ mgbọrọgwụ na nke ọzọ bụ onye ọrụ novice ...
Zaghachi Juvenal tarqui
mgbe ị na-agbanyụ ma na ya ga-esi na mgbọrọgwụ
Enwere m ike ịtọpụ
Zaghachi na archon
Ọ nwere ike ịdị na motorola d1?
Zaghachi ka noel
na Xperia Go agaghị ekwe omume Mgbọrọgwụ M ugbua gbalịrị ihe niile 🙁
Ejiri m samsumg s3 international (i9300) na ejideghị m ya, naanị m nwetara mmanya na-acha odo odo ọ nweghịkwa ihe ọ bụla pụtara, jiri robot checke ọ gwa m na ọ gbanyeghị mkpọrọgwụ ka m si eme
Nwere ike ịza ndị na-enweta naanị bọtịnụ na-acha odo odo na njedebe? DAALỤ
Ọtụtụ ndị ajụọla gị ma ị zaghị onye ọ bụla n'okwu ahụ.
N'ezie m nwere ike ịza, ọ dị nfe dịka na ngwa ahụ adabaghị na ọdụ ndị a.
Cheregodi m maka sel m na Samsung Galaxy Mega GT-I9152 na ngwa a arụghị ọrụ m, mmadụ enwere ike inyere m aka ịgbanye mkpọrọ m biko ... ihe ọzọ bụ na mmadụ mara etu esi agbanwe ya na 4G, biko nyere m aka .
Nke a arụghịrịrị m ọrụ, sel m bụ gam akporo version 4.3 na enwere naanị bọtịnụ na-acha odo odo niile na Chinese nwere okwu mgbọrọgwụ n'etiti.E nwere ụzọ ọzọ ị ga-esi mee ya na-enweghị framaroot na enweghị iji pc?
ọ na-arụ ọrụ maka M4?
Mario Enwere m M4TEL ss1090 ọ rụkwara m ọrụ nke ukwuu
Zaghachi Pablo Lopez
Na maka Samsung galaxy s mini mini
onye nzuzu dijo
ị nwere ike ị gbanye oroma gova?
Enwere m akara ekwentị, mee ka esi gbanye mgbọrọgwụ yana ana m anwale ọtụtụ mmemme mana ọ nweghị ihe mere
Zaghachi josimar garcia
Kedu maka, achọrọ m ịma ma ị nwere ike gbanye motorola X ụdị XT1058, m ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịza m, ebe m ka na-agba ume mgbọrọgwụ ya, ebe ọ gbanyere mgbọrọgwụ iji weghachite ụfọdụ faịlụ m na-ehichapụ na mberede. nke a ị nwere ike unroot?
Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu !!
Zaghachi Jorge Monsivais
MY pantech achọpụta achọghị ka ịgbanwuo WiFi mgbe iweghachi a ndabere na WiFi paswọọdụ Recovery ... olee otú m wụnye OS ọzọ site na mgbọrọgwụ?
isa isa dijo
Etu ị ga-esi laghachi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mgbọrọgwụ nna ukwu ekele
Ndewo, olee otu m ga-esi wepu ngwa nke ndi China ma jiri SuperSu dochie ya? Site na ndabara ikikere na-apụta na Chinese. Anaghị m aghọta ebe m ga-aka akara. Achọrọ m azịza ngwa ngwa biko.
Ozugbo ibudatara SuperSu ma ọ bụ SuperUser na Storelọ Ahịa Play, ọ ga-ajụ gị ma ịchọrọ iwepụ ndị China.
Ndewo: Enwere m Galaxy SIII mini ma ọ gara nke ọma, mgbọrọgwụ enweghị nsogbu mana mgbe m chọrọ iji superSU ọ naghị ekwe m, n'ihi na ngwa China na ndabara anaghị ekwe m. Achọrọ m azịza ngwa ngwa biko. Oh ... na maka ndị nwere RARZ D1 igwe kwụ otu ebe na-enweghị nsogbu na framaroot.
Nhọrọ ọzọ ị nwere bụ ịbanye n'okporo ụzọ / data / ngwa ma ọ bụ / Sistem / ngwa ma chọọ ngwa nke ngwa Root Chinese, ya bụ, SuperUser China ma hichapụ ya na ihe nchọgharị faịlụ faịlụ. Mgbe ahụ ịmalitegharị ma wụnye Superuser ma ọ bụ SuperSu na ọ bụ ya.
Pablo Alvarez nwere ebe obibi dijo
Kedụ maka ndị enyi, naanị m na-ahụ ihu igwe na-acha odo odo ma enyocha m na mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ ma ọ bụrụ na m bụ mgbọrọgwụ ọ na-ekwu mba, gịnị ka m ga-eme? Enwerem Obere IBS
Zaghachi Pablo Alvarez
Ekele m nwere Sony L na m ga-achọ iwepụ ya. Ọ bụrụ na m jiri ngwa ahụ ị nyere ... ọ ga-adị mma? Maka na achọghị m ịghagharị ekwentị m. Daalụ ekele
Anaghị m emeghe ogwe galaxy ngwa 2 i317m mgbịrịgba na famroot m naanị nweta gandalf
Zaghachi onye Kristi 507
N'ehihie, m ga-agwa gị ihe mere m na - enwe mmemme a na lg g2 na kit kat 4.4.2, ma ọ bụrụ na m maraworị na enweghị m ịnwale ya, arụnyere m ma gbanye mgbọrọgwụ, agbalịrị m mmemme ahụ chọrọ mgbọrọgwụ ch2 ma ọ bụ ihe yiri ya, Iji gbanwee ụkpụrụ ndị dị na egwuregwu ahụ, ọ rụkwara ọrụ, mgbe m bidogharịrị ekwentị ahụ, ọ naghị arụ ọrụ ọzọ, arụnyere m ya ọzọ, ọ gwara m na mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ bụ mgbọrọgwụ, ma ọ bụ ihe yiri ya a kpọrọ ya, m wụnyere super su na ọ naghịzi arụ ọrụ maka m mgbọrọgwụ, m na-ewepụ ihe niile na ọzọ m wụnye Chinese, ọzọ m mgbọrọgwụ, m ọsọ ọsọ iji wụnye ihe m chọrọ, mmemme iji detuo ma chekwaa ihe niile m wi fi okwuntughe (naanị mgbọrọgwụ) ma ọ rụụrụ m ọrụ, mana ọ na-agba ọsọ na-ahapụ oghere, ebe a ka ihe niile gbanwere, mmemme ahụ gwara m ka m bidogharịa wifi, tupu mgbe m gbanyere mkpọrọgwụ na 4.2 ọ jụghị m mana m nyere ya dị mma, site n'oge ahụ m na-edebe wi fi na mmanya, dị ka ịchọrọ ịgbanye, mana na-enweghị atụgharị n'eziokwu, dị ka mgbe anyị gbanyụrụ ya ma gbanye ya, mana n'etiti okporo ụzọ. M reboot ekwentị, ọ ka bụ otu. Enweghị m nhọrọ nke nrụpụta siri ike, atụfuru m ihe niile, na ihe ijuanya, ọ ka bụ otu ihe ahụ mgbe nrụzigharị siri ike, ebe m na-echegbu onwe m ebe ọ bụ na m tọgharịa ugboro 2 na ihe ọ bụla, ọ fọrọ nke nta ka m gaa ọrụ ọrụaka, mana na njedebe ma dị ka nhọrọ ikpeazụ m gbalịrị site na pc na pc suite reinstalling the kit kat 442, ọ gaghị ekwe m, ruo mgbe m hụrụ nhọrọ iji rụkwaa mmelite ọjọọ (a kpọrọ ya ihe yiri ya, nhọrọ m na-eme cheta kpomkwem) Emere m ya ma o were ogologo oge dika m emelitere na kit 442, emechara m emegharia ya siri ike.
Ana m agwa ya ma ọ bụrụ na mmadụ enwee nsogbu yiri nke a, ajụjụ m maka amamihe nke Francisco bụ na ị chere na ọ nwere ike ime, ọ ga-abụ mgbọrọgwụ ọjọọ ma ọ bụ na ọ bụ mmemme okwuntughe, yana ihe kpatara eji malite nrụsi ike site ya onwe ya adighi edozi ya ma tinyeghachi kk442 iji dozie ya? Daalụ maka ịgụ na ekele si Argentina gaa Francisco na onye ọ bụla.
Kedu ka m ga-esi kọwaa ya?
Akwa. Daalụ, ihe niile bịara dị mma.
Zaghachi Andy Moreno
You mara ma ọ na - arụ ọrụ na Primux Zeta?
ihe kachasị mma bụ ịnwale ya gwa anyị.
Antonia Belen dijo
Ọ na-arụ ọrụ maka lg l3 m? 🙂
Zaghachi Antonia Belén
Kedu ka m ga - esi ewepu ss-mini gt-4 jelii bekee samsung galaxy 19190?
Amaghị m ihe ga - eme, ụbọchị ole na ole gara aga mmemme ahụ rụrụ ọrụ maka m dị ka nseta ihuenyo na-egosi, na onye na - achọpụta mgbọrọgwụ gosipụtara na m agbanyela mgbọrọgwụ, mana ugbu a achọpụtara m na anaghịzi m mgbọrọgwụ, agbalịrị m iji ya ngwa ọzọ, na ole ka ọtụtụ, m na-ahụ nnukwu bọtịnụ na-acha odo odo, na mgbakwunye na ọ bụrụ na m pịa ya, ana m enweta ozi na ọ nweghị ike ijikọ na amaghị m ebe. Ọ dị mma mgbe ọ dịruru.
Nwara na QBEX QBA769, na-arụ ọrụ nke ọma. Ezigbo enyi na enyi.
Zaghachi Jorge Coral
Ahụrụ m obere windo nwere otu odo odo ma ọ na-ekwu mgbọrọgwụ dịka oge 4, gịnị ka ọ pụtara?
Zaghachi Rodrigo Caballero
Ọma nwalere na a Bogo QC na Framaroot okpu; Enwetara m akara ngosi abụọ, otu na-agụ Mgbọrọgwụ, nke a ka m "oyi" na Titaniun ma ọ dị ka ozi SU anaghịzi apụta na Chinese. Akara ngosi nke ọzọ nwere ike iju oyi ma ọ bụ wepụ ya ma ọ bụ na ọ dị mkpa ịnọgide na-agbanye mkpọrọgwụ?
Echere m na post a enweela oge, mana ọ naghị afụ ụfụ, jụọ
Enwere m xperia t2 ultra na ọ nwere JB, mana emelitere m na Kitkat 4.4.3.
Nwere ike iwepụ ngwa a?
Nwaanyị m nwetara bọtịnụ na-acha odo odo, enwere ngwa ọzọ iji gbanye ekwentị m htc
Ma ọ bụrụ na m nwere gam akporo 4.4 🙁
Ndewo, enwere m olileanya na ị ga-aza ọtụtụ ndị ọsọ ọsọ, ọ rụrụ ọrụ na s3 mini mana naanị m nwetara bọtịnụ na-acha odo odo ma ọ bụghị nke na-acha uhie uhie, android m bụ onye na-ekwu na ọ dakọtara mana n'ihi ihe ụfọdụ ọ naghị arụ ọrụ na m agbanyebeghị mkpọrọgwụ cell ka ọ ghara ịnabata ya, gịnị kpatara ya?
Zaghachi Elias Hernandez
Ndewo Francisco Ruiz la Verdad Viejo, nkuzi gị nyeere m aka nke ukwuu !! I meela nke ukwuu na enwere m nsogbu na faịlụ build.prop ọ hapụghị ịgbanye mgbọrọgwụ.Ma ekele maka nkuzi gị mgbọrọgwụ emeworị ma enwere m ike idozi faịlụ ndị na-ezighi ezi tupu.
Zaghachi Manrique Nerio
mbipute nke ekwentị m bụ 4.4.2
Ọ ga-aba uru ịgbanye ya?
Ndewo, enwetalarị m usoro niile, ọbụlagodi bọtịnụ na-acha odo odo, mana mgbe m nwara iji ngwa nseta ihuenyo ọ na-egosi na agbanyeghị mgbọrọgwụ, gịnị ka m ga - eme?
Edwin onyekwere dijo
Biko ị nwere ike imelite ya maka alcatel D1 ha ga-enyere m aka nke ukwuu ebe ọ bụ na ọ dị nso nso a enweghị m ike ịchọta ihe ọ bụla iji gbanye mgbọrọgwụ
Zaghachi Edwin Lopez
Ozugbo arụnyere SuperSu ọ na-agwa m na m kwesịrị imelite ọnụọgụ abụọ, mana o werela ọkara elekere. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
onye chọrọ azịza ya dijo
Kedu ihe kpatara bọtịnụ na-acha odo odo dị ogologo na-apụtaghị na-acha uhie uhie?
Nke m bu Huawei
Gam akporo version 4.3
Zaghachi onye na-achọ ngwa ngwa maka azịza ya
Bọtịnụ na-acha odo odo bụ n'ihi na ngwaọrụ gị adabaghị….
Zaghachi Jesus Mendez Ledezma
M nwere a Chinese mobile na gam akporo 4.1 na ngwa na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè, ezigbo mma post.
Ndewo: Enwere m mbadamba (nwa m nwanyị n'ezie), ebe naanị okwu "ANDROID" pụtara. ọ bụrụ na ịhapụ ya, ọ ga-adị otu ahụ rue mgbe batrị ga-agwụ. Kedu ihe na-eme.
Ọ bụrụ na mmadụ azaa m, m ga-enwe ekele dị ukwuu
Zaghachi Jesús Manuel
Ndewo ndị mmadụ, enwetara m nnukwu odo odo ahụ na mkpanaka m bụ SGS3 nke gamel jelii bean 4.3 Achọrọ m ịbụ nsụgharị dakọtara dịka usoro ihe omume ahụ si dị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime gị amata ihe ngwọta ma ọ bụ chọta ihe dị ebe ahụ, mee ka m mara pls pls m gmail gị ya Aga m akwụsị ebe a ^^ borjalb98@gmail.com
hello, ị ma ka esi aga ngwa na 32gb sd n’enweghị mkpa mgbọrọgwụ? Agbalịrị m ọtụtụ puku ngwa mana ha anaghị arụ ọrụ. Ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa inwe mgbọrọgwụ emesia, kedu ka m ga-esi mee ka ngwa ahụ gaa sd? Daalụ
Zaghachi na 12085151mlili +
can nwere ike iwepu lg g3 n'ezie site na iji ngwa a
nkera abraham dijo
Na s4 m anaghị arụ ọrụ, m ga - enweta otu bọtịnụ na - acha odo odo na - enyere aka
Zaghachi junior abraham
Ndewo Francisco, enweghị m ike ịhụ rọbọt ọ bụla na - arụ ọrụ maka mkpụrụ 10 fnac m 🙁 ¿¿¿
You maara nke ọ bụla nwere ike ịbara m uru? Daalụ.
Zaghachi ka emilio
Ndewo, onye ọ bụla maara ma Cat B15 nwere ike ịgbanye usoro a? Enweghị m ike ịnweta ozi gbasara ọnụ na ntanetị a ma ọ na-abịa juputara na ọtụtụ ngwa ndị na-ewe ohere.
Ọ B BE KWES WITHR WITH KWES WITHR MY MY CEL EXPERIA ZL C6502 resp.
Gbalịa ya gwa anyị.
Ka anyị kwuo otu oge zuru oke, .. mana gịnị ma ọ bụrụ na emesịa m chọrọ ịmalitegharịa ekwentị m na ọnọdụ ụlọ ọrụ, ọ ga-ekwe omume? Ọ ga-aga n'ihu na-agagharị ma ọ bụ na nhazi ahụ ga-apụ n'anya?
Ọ bụrụ na ịtọgharịa ya, nrụpụta ahụ ka ga-adị; dị ka ọhụrụ, ị ga-akpata ọzọ.
Ndewo enyi, enwere m galaxy trend Lite GT S7390L, emere m usoro ahụ niile ọ naghị arụ ọrụ maka m, echere m, usoro ikpeazụ apụtaghị dị ka ọ dị n'elu, ụdị android bụ 4.1.2, yana na njedebe m nwetara ihuenyo ọzọ nwere Otu bọtịnụ na-acha odo odo ma ghara ịwụnye supersu ma ọ bụ ihe yiri ya, biko nyere aka na obi abụọ, ekele: P.
Ndewo Francisco ajụjụ m bụ ihe ndị a Enwere m LG 7X na gam akporo 4.4..2 enwere ike gbanye mgbọrọgwụ?
enwere ike gbanye samsung galaxi star gt-s5282?
Zaghachi juan sebastian gaviria
Jizọs c dijo
Ọ dakọtara na motorola moto e yana ụdị gam akporo 4.4.4 m na-eche azịza gị
Zaghachi Jesus c
Ọ masịrị m ya
Zaghachi Johan sebastian
Purple bụ ọbara ọbara ma ọ bụ odo odo
Zaghachi ka alvaro
Samsun S3, agbasoro m nzọụkwụ ahụ na njedebe m na-ahụ naanị bọtịnụ na-acha odo odo, ọ bụghị nke na-acha odo odo na nke na-acha ọbara ọbara, enyochare m iji hụ ma ọ gbanyere mkpọrọgwụ ma ọ naghị arụ ọrụ. ụfọdụ enyemaka?
Ana m eme ihe na mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ na mgbe m gbanye mkpụrụedemede China
Agbalịrị m ugboro 5 na obere s3 m ma mgbe m gwụchara windo ọzọ wee pụta ma ewepụghị ya, m mechiri mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ wee banye onye na-enyocha mgbọrọgwụ ọ gwara m na agbanyeghị mgbọrọgwụ
Zaghachi jesus garcia
Kedu ihe m ga - eme iji gbanye S Galaxy Young
Morningtụtụ ọma, mbadamba Samsung galaxy tab-2 10.1 mgbọrọgwụ na-enweghị nsogbu. Android 4.2.2 Daalụ nke ukwuu
Njikọ ibudata mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ bụ ọnyà ọnwụ
Ọ na-arụ ọrụ na samsung galaxy m m s4 mini 4.4.2?
Zaghachi Luis sergio
Na mgbọrọgwụ nna ukwu njikọ ọcha ojoro
Ọ wụnyere ekwentị pụrụ ịtụkwasị gị obi na ọ dịghị imi iwepụ ya.
Daalụ nwoke, i meela nke ukwuu….
Zaghachi Christian Perez Perera
Etu esi gbanye mbadamba SuperSonic SC-91JB
Ndewo, agbalịrị m onye na-agba ọsọ na nsonaazụ bụ otu ihe ahụ dị ka kingrot, ọ bụ ihe na-abaghị uru, agbalịrị m ya na galaxy s4 na android 4.4.2, na Huawei na mui 3.0, ọ naghị arụ ọrụ n'ime nke ọ bụla, biko , tupu ịdebe ihe, lelee ngwaọrụ ọ dakọtara, M na-eche echiche m na naanị otu ụzọ ị ga-esi bugharia mkpanaka bụ nke ọdịnala site na pc, ihe ọ bụla ha na-ekwu na nkọwa nke ọtụtụ na ntanetị na ntanetị dị iche iche, I enwebeghị ike ịgbanye ekwentị ọ bụla yana ngwa arụnyere na ngwaọrụ ahụ, ọ bụ site na pc mgbe niile, na onye ọ bụla enwetala ihe ịgwa m otu ha si mee ya na nke mobile, ụdị na ụdị android, enwere m olileanya azịza, emeghị m ihe ịga nke ọma ...
Ekwentị m bụ alps s850c ma ọ nweghị ụzọ isi gbanye mgbọrọgwụ Agbalịrị m usoro niile enwere ma ọ nweghị ihe ọ bụla - - HELP!
Zaghachi ka ecastan
Esi bugharia mbadamba
Na-arụ ọrụ na alcatel m aka 4033A
Zaghachi Maria Eugenia Hernandez
Ọ B FOR maka S3 LTE?
Zaghachi alan alonso
Mmụọ ozi Perez dijo
na ROPA08, na a funker s454 na na bravus 950 mbadamba, samnsumg s2, na ị gaghị enwe ike ma ọ bụ mara apụtaghị na ndị ọzọ adịghị, enweghị m echiche gbasara sayensị kọmputa, telephony na emeela m ọtụtụ ihe, na ị naghị ị nwere ike ọ nwere ike bụrụ na ị naghị eme ya nke ọma, n'elu agụọla m nke na - enweghị ike ịmata ọdịiche dị n'etiti acha ọbara ọbara na agba odo ... onye ọkachamara n'ọrịa anya bụ nhọrọ.
Enwerem Samsung S2 nwere Loolypop 5.1.1. Ọ na-aga dị ka ogbugba, batrị m dị n'agbata elekere 16 na 22 na nkezi, na-enye ya tute.
Na ekele niile nye ndị a na-arụ ọrụ maka ndị umengwụ dị ka m na-erite uru n'ọrụ ha.
Na-ekele ndị na-nri, FREE ahia.
Zaghachi Angel Perez
Edison J. Romo R. Onye dijo
Ọ naghị arụ ọrụ, ihuenyo ikpeazụ nke Root Master apụtaghị na onye ọzọ na-egosi na Samsung Galaxy S4 I9500 m.
Zaghachi Edison J. Romo R.
Ndewo enyi, hapụ ngwa arụnyere na mgbe ị na-ehichapụ ya, a na-ewepụ mgbọrọgwụ ya, ị ma ka m ga - eme iji wepụ ya na - ewepụghị mgbọrọgwụ? Ihe na-eme bụ na ọ dị ka ibu mana na Chinese ma amaghị m ma enwere ike ịgbanwe ya ma ọ bụrụ na enwere nsụgharị Bekee ọ ga-aka mma. Biko nyere aka. Ọ na-arụ ọrụ m na xperia s mana achọghị m ngwa ahụ ma amaghị m ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ ihichapụ ya na-enweghị emetụta mgbọrọgwụ
Anaghị m download ngwa iberibe
Daalụ nke ukwuu, ozi ndị magburu onwe ya, enwere m ike iwepụ mbadamba AIKUM AT792HC m ngwa ngwa.
Zaghachi ka chilis
Ogbaaghara: 3 dijo
Enweghị ike ịgbanye samsung galaxy tab 3 (smt210) bụ gam akporo 4.4.2.
Kedu ngwa m nwere ike iji ???
Biko achọrọ m ka mbanye anataghị ikike egwuregwu ma ọ bụrụ na ị na-enyere m aka mbanye anataghị ikike egwuregwu a nke bụ: AVATAR MUSIK ị nwere ike ibudata ya na play store ☺.
Biko ọ bụ na ekwentị m gbanyere mkpọrọgwụ m ji mbanye anataghị ikike mana ọ nweghị nke baara m ọrụ? .
Ya mere enyemaka biko, ana m arịọ gị ...?
Zaghachi Crisgame: 3
Ndewo ndị enyi m chọrọ ịjụ gị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgwa m otu esi eme ya na Samsung GALAXI TRED LITE
Kedu ihe bụ mgbọrọgwụ Master icon? N'ihi na ọtụtụ na-apụta n'ihu m
Zaghachi Agoos Campos
Ndewo Frank, ezigbo abalị, naanị m nwere olileanya na ị ga-enyere m aka ... di m gụrụ m ozi m niile ma ziga ya site na ngwaọrụ ọzọ ma ọ bụ pc, ihe niile na-egosi na o nwere mgbọrọgwụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ na-ele m otu m ga-esi wepu ya na Enweghị m ike ịnwe ekwentị m ọzọ biko nyere m aka nke a bụ nsogbu ... daalụ na ị dịkwa mma
gbanwee ekwentị gị ma megharịa
Zaghachi san pateste
1234asho 56789 dijo
ọ dịghị otu ngwa ndị a abaghị uru! (naanị ihe ha na-akpata nsogbu)
Zaghachi na 1234asd56789
hi francisco anya na m nwere samsung galaxy grand prime sm-g531f x biko ị nwere ike inyere m aka kedu ka m ga-esi gbanye ya x biko
M ga-esi na ibudata na m ga-etinye ekwentị m na-achọghị na ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ahụ ọ gaghị ekwe ka m download !!! Ihe m na-eme?
Enweghị ụzọ m ga-esi gbanye Samsung Galaxy Trend 2 Lite..Egbalịla m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku ụzọ na enweghị ihe ọ bụla .. ọ bụrụ na mmadụ gwara m ka m gaa ebe ahụ wee susuo ya ọnụ
Ala Dayan dijo
Ọ dị mma n'oge a, m ga - achọ ịrịọ gị maka enyemaka ka m nwere ike gbanye Samsung S7 m na - enweghị ike iji pc m S7 bụ Android 7.0 ma m gbalịrị ọtụtụ mgbọrọgwụ mana enweghị m ike inye aka biko kelee gị n'ọdịnihu ...
Zaghachi Dayan Llanos
M nwere a Huawei Y6 II na adroid 6.0, m na-agbalịkwa ọtụtụ ụzọ na ha na-agwa m na ọ bụ nnọọ siri ike na-akpata
Ndewo, lg x max adịghị adaba na kedu ka m ga-esi mee ya?
Zaghachi Alejandro coila
Maka p8 Lite?
Jikọrọ ọnụ Mon, na-abaghị uru mgbaghoju anya RPG na nke ị nwere ikpokọta gị nnukwu anụ ike ọzọ ike
Samurai Kazuya, a samurai RPG click na nnukwu visual ụzọ